Posted by PAUK | 11/02/2008 | Labels: စားစရာများ... |
တင်ပါ။ တင်ပါ။ ရဲရဲကြီး တင်ပါ။ အိုကေပုံရတယ်။ အရည်သောက်ကဘာလဲ။ ဟင်းမချက်တာနဲ့ အတော်ဘဲ။ တပန်းကန်လောက် ကမ်းလိုက်ပါကွယ်။ ကိုကာကိုလာနဲ့ဘဲ သောက် လိုက်စားလိုက် လုပ်ပတော့မယ်။ ထမင်းလဲမစားရသေး နေ့လည် ၂၃၀ မြန်မာစံတော်ချိန် ရှိပါပြီရှင်။
အလည်က မဲမဲလေး ၃ လုံးကဘာလေးတွေလဲဟင်၊ စပျစ်သီးခြောက်လား
ရှိသေးရင် နည်းနည်းကျွေးပါ ပေါက် ဘာလချောင်ကြော်လေးလည်း စားချင်တယ်
ပေါက်ရေ.. မဆိုးဘူးဟ.. ဖြစ်တယ်.. တို့ကတော့ စိတ်ကူးထဲမှာချက်နေတာ အတော်လေးကြာပြီ။ အမွှေးအကြိုင် ပစ္စည်းတွေက ရနေပြီ ဒါပေမယ့် ထောပတ်လိုနေတယ်.. ဘယ်လိုထောပတ်မျိုး ၀ယ်ရမှန်း မသိဘူးဖြစ်နေတယ်.. မတန်ခူးကတော့ Gee တဲ့.. ဒီမှာလည်း ရှာတာ ရှာမရဘူး... ပေါက်ချက်ထားတာ အဆင်ပြေမယ့်ပုံပဲ.. carry on ပေါက်ရေ... :D
Allowrie '' တဲ့new zealand butter
ညီမ ပဲအ၀ါ အစား Garden Pea ကို ပြုတ်ပြီးမှ ထဲ့ရောရင် အဖြူ အစိမ်းနဲ့ တမျိုးလှတယ် အမကိုသင်ပေး တဲ့ အမကတော့ ပဲအစိမ်းရောင်သုံးတယ်။
ချက်ရင် ကုလားပြည်က ဂီး ထောပတ်ကိုဘဲရွေးပါ။ သြစတြေးလျ ဂီး ဆိုတာ အနောက်နိုင်ငံ ထောပတ် အနံ့ဘဲ ရတယ်။ စလုံးတုန်းကတော့ ကုလားတွေကို မေးပြီး Raav ဆိုလားဘဲ အဲဒီထောပတ်ကို ရွေးချက်တာ အလွန်မွှေးပါတယ်။
အင်းဗိုက်ဆာတာ နဲ့ အတော်ပါပဲ ပေါက်ကြီး ရာခုလောက်ဆိုကုန်ရောပေါ့ ချန်ထားတာများရှိရင် အသစ် ချက်ကျွေးပါဦး .. ပဲ ဆိုမှ ဗရာကြော် သတိရတယ် ကိုယ် တိုင်လုပ်ပြီးမှ ပဲ တင်တော့မယ် ကွာ... နက်ဖြန်ပေါ့ .မဟုတ်ဘူးလား.. ဟဲဟဲ..
ခေါင်းငိုက်စိုက်နဲ့ ပြန်လှည့်သွားပြီ။ :(
ဒီမှာဆန်က ရှမ်းဆန်လိုမျိုး တမျိုးပဲ ရှိတယ်။
ယိုးဒယားဆန်ကျတော့ ပိန်၂သွယ်၂ ရှည်၂ကြီး
ထူးထူးဆန်းဆန်းစားချင်ရင် ကျနော်ဘဲ ချက်ရတာ...
ပေါက် ရေ..အရင်တခါ ကတည်းကလာလည်တာ ၀င်
တယ်နော်။ ဒါနဲ့ Sin dan lar အိမ်ကိုလဲသွားချင်တာ
မီးမီးလည်း ပဲထောပတ်ထမင်း ချက်စားဦးမယ်။း)
ကျေးဇူးနော်. (မ) ပေါက်.
ဒီနေ့မှ မခင်ဦးမေဆီက ကူးလာတာ..
ဆင်ဒဏ်လား ကအလှပြင်နေလို့ ဘယ်သူ့မှပေးမ၀င်ဘူးတဲ့...ဟိ